Nepal - कांग्रेस प्रतिक्रियात्मक मात्रै भएर हुँदैन : थापा
प्रतिपक्षी भूमिका सम्हाल्ने हैसियतमा कांग्रेस कहिले आउँछ ?
नेतृत्वले पराजयबाट निराश भएकालाई पुँजीकृत गर्न सकेको छैन । सानोतिनो प्रयासले कांग्रेसलाई ‘रिभाइभ’ गर्न सकिँदैन ।
नेतृत्वबाट तपाईंले राखेको आशा के हो ?
अब टालटुले र कर्मकाण्डी पाराले हुँदैन । कार्यशैली बदल्नुपर्छ । कांग्रेस बदलिएको आम जनताले अनुभूत गर्न सक्नुपर्छ । हामीले आफ्ना मतदाता जोगाएर थप १५ लाख मतदाताले कांग्रेसलाई पत्याउने आधार खडा गर्नुपर्छ ।
महाअभियान चाहिएको छ । पार्टीको सिद्घान्तमा पुनव्र्याख्या चाहिएको छ । संगठनको पुनर्निर्माण आवश्यक छ । चारित्रिक शुद्घता र आचरणमा स्निग्धता चाहिएको छ ।
कांग्रेस कमजोर प्रतिपक्षी भयो भन्ने गुनासो छ नि ?
स्थानीय सरकारमा हामीले जितेका ठाउँमा नयाँ ‘स्ट्यान्डर्ड’ कायम गर्न सक्नुपर्छ । प्रतिपक्षी भूमिकामा पनि यही कुरा लागू हुन्छ ।
प्रतिपक्षको भूमिकामा कांग्रेस केवल प्रतिक्रियात्मक भयो भन्ने आरोप छ ?
प्रतिपक्षीय भूमिकामा हिजोजस्तो अहिले पनि हामी केवल प्रतिक्रियात्मक मात्र भएर हुँदैन । अहिले जुन ‘ओरियन्टेसन’ को दुई तिहाई बहुमतको सरकार छ, उसले हामीभन्दा फरक ढंगले काम गर्छ । यो स्थितिमा बलियो प्रतिपक्ष आवश्यक हुन्छ ।
सरकार अतिवादी बाटोमा गएको हो ?
कांग्रेसले सशक्त र प्रभावशाली प्रतिपक्षको भूमिका वहन गर्न सक्यो भने संविधानले परिकल्पना गरेको प्रतिस्पर्धाको राजनीति बलियो र संस्थागत भएर जान्छ । प्रतिपक्ष कमजोर भयो भने नेकपालाई अतिवादी बाटोतिर जान नकारात्मक ढंगले उत्प्रेरित गर्न सक्छ ।
→यो पनि पढ्नुहोस् : कहाँ छ प्रतिपक्ष ?